कमरेड बाबुरामसँगको मौन संवाद | चितवन पोष्ट दैनिक
कमरेड बाबुरामसँगको मौन संवाद
२०७० चैत्र ३, सोमबार ०३:२९ गते
अघिल्लो महिनाको अन्त्यतिर काठमाडौँको एउटा पाँचतारे होटलको एक कार्यक्रममा भाग लिने मौका मिल्यो । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित उक्त कार्यक्रममा प्रमुखअतिथिका रुपमा पूर्वप्रधानमन्त्री कमरेड बाबुराम भट्टराईलाई आमन्त्रित गरिएको रहेछ । कार्यक्रममा अतिथि र सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति थियो । दर्शकहरुको अघिल्लो लाइनमै बसेका कारण म सबै अतिथिसँग प्रस्टैसँग आँखा जुधाउन सक्ने अवस्थामा थिएँ ।
निर्धारित समयमै सबै अतिथि आइपुगे र कार्यक्रम पनि सुरू भयो । कार्यक्रम सञ्चालकले कार्यक्रम सुरू गरेपछि धेरैको ध्यान वक्ताको भाषणतिर केन्द्रित हुन सुरू भयो । ठीक त्यति बेलै मेरो नजर कमरेड बाबुराम भट्टराईको नजरसँग जुध्न पुगेछ । आपसमा नजर जुधेको महसुस हुनासाथ मैले अलि अप्ठ्यारो मान्दै नजर अन्यत्रै लग्न मात्र के खोजेको थिएँ, उताबाट पर्दैन–पर्दैन भन्दै मुन्टो हल्लाएको देखिहालेँ । त्यसपछि मलाई केही कुरा सोध्न मन लागेर जिज्ञासा राख्ने अनुमति माग्न खोज्दै थिएँ, फेरि कमरेडको मुन्टो हल्लियो हुन्छ–हुन्छ के सोध्नुछ, सोधिहाल भन्दै । अब मैले पनि मौन संवाद सुरू गर्दै पहिलो पश्न राखिहालेँ ः
– कमरेड गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसादका बाबुआमाका आँखाबाट बगेको आँशुको मूल्य कति होला ?
शान्त स्वरमा कमरेडले जवाफ दिनुभयो ः
आँखाबाट बगेको आँशु पक्कै पनि तरल पदार्थ नै हो । हामीले प्रकृतिको पानीलाई जस्तै आँखाबाट बगेको पानीलाई पनि अब मह¤व दिनुपर्छ र त्यसको मूल्य तोक्नुपर्छ । यसलाई पनि प्रकृतिमा हामीले पाउने हावाको जत्तिकै मह¤व दिनुपर्छ, यो मेरो र सिंगै मेरो पार्टीको पनि धारणा छ । जुन तपाईंले गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसादका बाबुआमाको आँशुको कुरा गर्नुभो, त्योभन्दा पहिला सबै गोर्खालीको विशेषताका बारेमा केही कुरा बुभ्mन आवश्यक छ । हामी गोर्खाली पहिला–पहिला रगत बगाउनमा खप्पिस थियौँ, अहिले पछिल्लो समयमा आएर हामीहरु आँशु पनि बगाउन पर्छ भनेर त्यता पनि लागेका छौँ । फरक यत्ति हो, कसैले रगत बगाएका छन् त कसैले आँशु । हामी गोर्खाली रगत होस् वा आँशु बगाउने कुरामा पछि छैनौँ भन्ने कुराको उदाहरणका रुपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ ।
कमरेडको जवाफ सकिएझैँ मानेर मेले फेरि अर्को प्रश्न सोधिहालेँ ः
– के अब कृष्णप्रसादका बाबुआमाले न्याय पाउलान् त ?
कमरेडले अलि जंगिँदै जवाफ दिए ः
अन्याय त हामीमाथि भयो । अन्याय हामीमाथि हुने अनि न्याय अरुले पाउनु पर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ कहीँ नपाएर ! हेर्नुस्, यो प्रश्न नै गलत छ, यसलाई सच्चाएर फेरि सोध्नुहोस् ।
त्यसपछि मैले प्रश्न सच्चाउँदै फेरि सोधेँ ः
– कृष्णप्रसादको हत्याको कारण त व्यक्तिगत रिसइवी हो रे नि, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यसपटक भने कमरेडले प्रश्न खस्न नपाउँदै जवाफ दिए । सबै हत्याका कारण व्यक्तिगत नै हुन्छन् । तपाईं मान्नुस् या नमान्नुस्, यो मृत्यु भन्ने चीज नै लेखान्त हो । कसको मृत्यु कहाँ छ, कसलाई पो थाहा छ र ? यो त अघिल्लो जुनीको कर्मको फल हो । अघिल्लो जुनीमा जे गरियो, अहिले त्यो भोग्नैपर्ने हुन्छ । मानिस जन्मँदैमा मृत्यु पनि सँगै ल्याएको हुन्छ भन्ने कुरालाई कसैले पनि बिर्सनुभएन । कोही ढिलो र कोही चाँडो, आखिर मर्नु त सबैलाई छ । जन्मेकै मर्नका लागि अनि मरेपछि यो लफडाबाजी किन ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।
कमरेडको जवाफबाट मैले चित्त बुझाउन सकिनँ र फेरि सीधै सोधेँ ः
– कमरेड कृष्णप्रसादको हत्या किन भयो ?
यसपटक भने कमरेड अलि आक्रामक तवरले प्रस्तुत हुँदै जवाफ दिए ः
कसले भन्छ त्यसलाई हत्या भनेर ? त्यो त सरासर आत्महत्या हो । भर्खर एसएलसी दिएको बच्चाको हत्या गर्ने पार्टीको कुनै योजना नै थिएन, र त्यो हत्या पनि होइन । त्यसका बारेमा चारैतिरबाट कुरा उठेपछि हामीले पनि पार्टी बैठकमा यस घटनालाई गम्भीर रुपमा लिने निर्णय गरेका थियौँ । त्यसैअनुरुप हामीले पार्टीबाट एउटा सत्यतथ्य जाँचबुझ आयोग नै बनाएर छानबिनलाई अगाडि बढाएका पनि थियौँ । मेरै संयोजकत्वमा गठित त्यो जाँचबुझ आयोगले एउटा सत्यतथ्य प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थियो । बरू, सत्य कुरा के रहेछ, म अहिले नै भन्दिन तयार छु ।
खासमा कुरा के रहेछ भने त्यो समयमा ती भाइले भर्खर एसएलसी परीक्षा दिएर परीक्षाफल कुरेर बसेका रहेछन् । उनलाई यो बुर्जुवा शिक्षाप्रति सुरूदेखि नै वितृष्णा पैदा भएको रहेछ । उनी आप्mनै दाजुको दबाबमा परीक्षामा सामेल भएको भए पनि परीक्षाफल प्रकाशित नहुँदै आत्महत्या गर्ने योजना बनाएर चितवन झरेका रहेछन् । संयोग, उनी आत्महत्या गर्नका लागि जुन झाडीमा पसे, केही अघिदेखि हाम्रा केही कार्यकर्ता त्यसै झाडीमा नै लुकेर बसेका रहेछन् । त्यो गोर्खाली केटाले हाम्रा कार्यकर्तालाई नदेखेर नै हुनुपर्छ, झाडीमा पुग्नासाथ हत्तपत्त आत्महत्याको प्रयास गरिहालेछ । त्यो कुरा हाम्रा कार्यकर्ताले देखेपछि उसलाई बचाउन पर्छ भन्दै उसको पछि लागेछन् । हाम्रा कार्यकर्तालाई देखेपछि त्यो केटो भागेछ । फेरि हाम्रा कार्यकर्ता पनि उसलाई बचाउनकै लागि भनेर उसकै पछिपछि लागेछन् । केटो अघिअघि, हाम्रा कार्यकर्ता पछिपछि हुँदै केही पर पुगेपछि केटोले हाम्रा कार्यकर्तासँग रहेको बन्दुक खोसेर आफैँलाई बन्दुकले हानी आत्महत्या गरेछ । अब बाहिरबाट सतही आँखा र प्रतिगमनकारीका आँखाबाट हेर्दा त हाम्रै कार्यकर्ताले हत्या गरेको जस्तो पनि देखिन सक्ने भयो, तर यथार्थ कुरा त्यो सत्य होइन । उसले आत्महत्या नै गरेको हो, त्यो हत्या होइन भन्ने त हाम्रा डी.सी.एम. कमरेडहरुलाई पनि प्रस्टै थाहा छ ।
कमरेडको जवाफ सकिँदा नसकिँदै मैले प्रश्न छोडिहालेँ ः
– कमरेड, यो घटना त अन्तर्राष्ट्रसम्म पनि पुग्यो भन्छन् नि । यसले तपाईंको पार्टीलाई केही असर नगर्ला ?
यसपटक भने अलि निराश हुँदै कमरेडले जवाफ दिए ः
हेर्नुस्, यो सब प्रतिक्रियावादीहरुको चलखेल हो । यो घटनालाई हामीले षड्यन्त्रका रुपमा हेरेका छौँ । विभिन्न विदेशी शक्तिहरुको अगाडि हामीलाई दोषी देखाएर हामीलाई उनीहरुको नजिक पर्नबाट रोक्ने प्रयास गरिएको हामीलाई प्रस्ट थाहा छ । हामीले भारतसँग त यसबारेमा कुरा पनि गरिसकेका छौँ । उसले हामीलाई नआत्तिन पनि भनिसकेको छ । जहाँसम्म अमेरिकाको कुरा छ, त्यसको जिम्मा पार्टीले अध्यक्ष कमरेडलाई दिइसकेको छ । अमेरिकासँग पनि पहिलो चरण कुरा भैसकेको मैले बुझेको छु । हेर्दै जाऊँ, के–के हुन्छ ?
लामो सास तान्दै सुस्केरा हालेको देखेपछि मैले अन्तिम प्रश्नका रुपमा सोधेँ ः
– तपाईंलाई भन्न मन लागेको र मैले सोध्न बिर्सेको केही कुरा छ कमरेड ?
निकैबेर सोचेपछि कमरेडले धम्कीपूर्ण भाषामा बोल्दै भनेँ ः
मैले अरु केही जान्दिनँ, मैले बोलेका सबै कुरा मिलाई आउनु प¥यो । जनताले सुन्दा अहिलेसम्मकै पहिलो राम्रो बोल्ने नेताका रुपमा मलाई हेर्नुप¥यो । फेरि तल–माथि भयो भने प्रश्नकर्तासँग जनता रिसाउँछन् नि ।
यसपटकको जवाफले मेरो चित्त कत्ति पनि बुझेन, तैपनि जनताका नेतासँग बारम्बार प्रश्न सोधिरहन मन लागेन र कमरेड बाबुरामलाई धन्यवाद भन्दै बिदा मागेँ । उनले पनि टाउको दुवैतिर हल्लाउँदै प्रश्न सोधेर आप्mनो विचार जनतासामु पु¥याई दिएकोमा धन्यवाद भन्दै नबोलेरै धन्यवाद दिए ।